Swinging Ladder Dredges - I-Ellicott Swinging Dragon® Dredge Line
& Kulula Ukuhlangana
I-Ellicott brand® swinging ladder dredge yokuqala yaklanywa futhi yakhiwa kuma-1940s. I-dredge ekuqaleni yayihloselwe ukumba izindlela zamanzi ezazincane kakhulu ukuthi ama-dredges ajwayelekile asebenze. Namuhla i-Ellicott iyaqhubeka nokwenza futhi ikhiqize i-8 ", 12", kanye ne-14 ″ Swinging Dragon® Dredges okulula ukuthutha nokunikela ngobubanzi be-swing ububanzi ngokunemba okulungile.
Isakhiwo se-dredge heavy-task dredge sakhiwe ukuhlala iminyaka eminingi futhi silungele amaphrojekthi wezemvelo, umsele, umgwaqo wamanzi, nesihlabathi namaphrojekthi ahlobene nogobolondo. Amadigri ethu wokushwibeka ayakwazi ukucubungula izinhlobo zenhlabathi ezihlanganisiwe nezinto zokwakha eziqinile njengobumba nodaka.
Ulayini womkhiqizo we-ladder swinging ladder dredge unikela ngemishini eyahlukahlukene efana ne-Ellicott Series 360SL Swinging Dragon® Dredge. Le dredge ifakwe izilawuli ezilinganayo ze-elektroniki zokwenza umsebenzi onembile wokwehla kabusha. Ngabe ufuna i-dredge ekulula ukuyihlanganisa? Ngemuva kwalokho ungahle uthande ukucabanga ngefayela le- I-Ellicott 460SLM Swinging Dragon® Dredge engahlanganiswa kalula ngeqoqo lamathuluzi esandla nama-cranes asolwandle. Okwe-opharetha onolwazi, i I-Ellicott Series 860SL Swinging Dragon® Dredge iyakwazi ukumba ekujuleni okufika ku-30 ​​′ (9.1 m) futhi ingamelana nezimo ezingezinhle.